ရွာသူ အသစ်လေးပါရှင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရွာသူ အသစ်လေးပါရှင်
- shwe zin
Posted by shwe zin on Jul 28, 2012 in Copy/Paste | 40 comments
မန်းဂေဇက်မှာ register မလုပ်ဘဲ ဝင်ဝင်ဖတ်နေမိတာ တစ်နှစ်ကျော်ပါပြီ။
သူကြီး ဦးခိုင်၊ အဘဖော ၊ဦးပေ ၊ကြီးမိုက်၊ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ၊ချိုပေါ့ကျပိုင်ရှင် ဘ ဘလက်
ဒက်ဂလောက် ဂီ ( update နာမည်တွေတော့ မမှတ်နိုင်တော့ဘူး)၊ တစ်ခါတစ်ရံ ပွဲဆူအောင်လုပ်တတ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ လူကြီးလူကောင်း ပီသနေတတ်ပြန်တဲ့ ကိုဘုုန်းကျော် ၊မခိုင်ခိုင်၊ မအိတုံ၊
အရီးလတ်..(အကုန်မရေးတော့ပါဘူးနော်) စတဲ့ နာမည်တွေကိုလည်း ရင်းနှီးနေတာ
ကြာပါပြီ။ ပွဲကြည့် ပုရိသတ်အဖြစ်ကနေ ရွာသူလေး တစ်ယောက်အဖြစ် ပါဝင်ချင်လို့ လက်ခံကြို
About shwe zin
shwe zin has written 1 post in this Website..
View all posts by shwe zin →
ဒါ့ပုံဆြာ လေးပေါက်ရဲ့ လက်ရာလေးတွေကိုလည်း အမြဲအာပေးနေသူပါလို့ ( ဒီနေ့ပဲဝင် ဒီနေ့ပဲတင်လို့ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါလို့…။
ရက်ဂျစ်စတာ မလုပ်ပဲဖတ်နေတာ တစ်နှစ်ကျော်ဘီဒဲ့
အခုမှ ဝင်လာတယ်ဆိုတော့ ဘယ်သူ့ကိုများ ဖဲ့မလို့ပါလိမ့် ဟိဟိ :grin:
ဥဥ က ဖဲ့ လို့ မရလို့ ဥ ကို ခွဲ ပစ်လိုက်မယ်တဲ့ ။ ဟဲဟဲ ။နောက်တာနော် !
ကြိုဆိုပါတယ် ရွှေဇင် ရယ်။
ရွှေဇင့် အတွေး ဆန်းလေးတွေ ကိုလဲ ဖတ်ဖို့ စောင့်နေကြပါတယ်။ :-)
အသစ်ကလေးကတော့ ရေးသားမှုဆန်းဆန်းလေးတွေနဲ့ ဝင်လာပြီဆိုတော့ အားပေးဖို့စောင့်မျှော်နေပါတယ်နော်။
ရွာထဲလည်း တိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ကာ… သံခမောက်တော့ဆောင်းထားမှ
Dရွာသူအသစ်ကိုတော့ဖြင့် သံသယရှိသဗျား ဟီးဟီး :cool:
ဘူယေးလဲ အဲ့ဒါ ဘူလေးယဲ….
မင်္ဂလာပါ.. ကျွန်တော်လည်း ရွာသားအသစ်ကလေးပါခင်ဗျာ..
ရွှေဇင်နာမည်ကြားတော့ မောင်စေတန်မှာ နာမည်ကျော်နေတဲ့
ရွာသူားအသစ်အသစ်ချင်း အားပေးနေပါတယ်နော်… ဟီးး.. :cool:
အဟောင်းထဲက အသစ်ဖြစ်ဖြစ် တကယ့်new လေးပဲဖြစ်ဖြစ် Welcome ပါခင်ဗျာ…
တားတားကိုရေ… တိရား ဟင်… မမ ချွေချင်
မရွှေဇင် ရဲ့ ပို့ ( စ ) တွေ မန့်တွေကို မျှော်နေပါ့မယ်ဗျာ !
မရွှေဇင် ရေးမယ့် စာတွေကိုလဲ
အမြန်ဆုံး ဖတ်ချင်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေး ပြောရင်း
ဝမ်းသာအားရ ကြိုဆိုပါတယ် ခင်ဗျ
မင်္ဂလာပါ…လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုပါတယ် မမရွှေဇင်
ကျုပ်ဝင်ဝင်ဖတ်နေတာ ၂ နှစ်ကျော်ပေ့ါ။ရီဂျစ်စတာလုပ်တာကတော့ စိတ်ပါလာမှပါဗျာ။
ဘယ်သူ့မှ ခွင့်တောင်းပြီးဝင်လာတာမဟုတ်သလို ထွက်ချင်လဲဘာခွင့်တောင်းစရာလိုတုန်း။
ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ်လုပ်စမ်းဘာ။ကျုပ်ကိုမကြေနပ်ရင်သူကြီးက block လိုက်ပေါ့။
သစ်သစ်ဟောင်းဟောင်း ယုစွဆုံး သူကြီးဘဲ ဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်ရင်တော့ ဗျင်းမှာပဲ။
ရွှေဇင် အိမ်နိးချင်းတွေ ထင်တယ်
ဟို မျက်နှာစာအုပ် မှာ
ပျူငှာစွာ ကြိုဆိုပါတယ် ..
ကျုပ်တို ့မှာမျှော်ရတာ လည်ပင်းရှည်နေပြီမဟာရာဂျာကြီးရေ
ရေးထားပါတယ် ခညာ့ …
မတင်ဖြစ်သေးတာပါ ခညာ့ ..
ခုလို တခုတ်တရ ပြောလာတာကို ကျေးဇူးပါ ခညာ့ …
ဘုရားစူး အသစ်စက်စက်ပါနော်..ဖဲ့ဖို့ဝင်လာတာ မဟုတ်ရပါဘူး..တစ်ချို့ ပို့စ်တွေမှာ ကိုယ်ဝင်ပြောချင်တာလေးတွေ ရှိပေမယ့် member မဟုတ်တော့ ဝင်မန့် လို့မရ ၊ နောက် ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက် ( ဝမ်းနည်းခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း )တွေ မျှဝေဖို့အကောင်းဆုံးနေရာလို့ ခံစားမိလို့ ၊သူများတွေရဲ့ ခံစားချက်တွေကိုလည်း မျှဝေခံစားပေးချင်လို့ register လုပ်လိုက်တာပါ ။ ဝင်လာဖို့ ခွင့်တောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ သာမန်မိတ်ဆက်တဲ့ ပို့စ်ေလေးပါ (ဝင်လာတဲ့အကြောင်းကို ကြော်ငြာတာပါနော်)။ အလင်းဆက်ရေ..အလင်းဆက်ကိုလည်း သိပါတယ်။ သိသလောက်ရေးပေးလိုက်ရရင် အရမ်းရှည်သွားမှာရယ်၊ ရုံးဆင်းခါနီး အပြေးအလွှားရေးရတာမို့ ဖျတ်ခနဲ ပေါ်လာတဲ့ နာမည်လေးတွေပဲ ရေးလိုက်ရလို့ပါ။ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကြိုဆိုကြတဲ့ အတွက် ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်လို့….
ဟင် .. စံပယ်တင်မှဲ့လေး ဆိုသမို့ ဒီက အသစ်ခေး များလားလို့ …
သီးခြားစီပဲကိုး… နာမီလေးဂ ဆန်းပ …
အများနည်းတူ ကြိုဆိုပြီးသားပါ … တခုတော့ တခုခုပဲ …
ဘယ်တခု လဲတော့ ကျုပ်လဲ မသိဘူး …
ရွာသူ အသစ်ဆိုရင် နဲနဲ တော့ လန့်တယ်…………။
ရွှေဇင်လေးရေ … အသစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် အဟောင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုဆိုပါတယ် …. မနေ့က မန့်တာလိုင်းကျသွားတော့ ဒီနေ့မှ ထပ်မန့်ဖြစ်တယ် … ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရွာလေးက ပျော်စရာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ် ….. ကိုယ်ကိုခင်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့အရေးအသားတွေကို မထောက်ခံတာဖြစ်ဖြစ် အဲဒီလိုကော်မန့်လေးတွေကိုက ပျော်စရာကောင်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ ရွာလေးပါ ……..
ဪ အများသိတဲ့ အတိုင်း မာရေ ကျောရေ ရှိရမယ်နော့ …
ဒူပေ နပေ ခံနိုင်ရည်လဲရှိရမယ် … စာတွေလဲရေး.. အရေခွံမာမာလေး စွပ်လာခဲ့ …
ကျုပ်တို့တော့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့ နေသားကြနေပီ …။
ရွှေစင် … ရွှေစင် … ရွှေစင် …. ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ……. မနေ့က ရောက်ခဲ့တဲ့ ရွှေဆိုင်နာမည်လေး …. ရေးရေးလေးပေါ်လာလို့ ……… တိုက်ဆိုင်တာနဲ့ …. ။
နာမည်လေးချန် နှုတ်ဆက်ပြီး .. ဘယ်ပျောက်သွားပါလိမ့် …….။ သတိရသလိုလို ဖြစ်မိလို့ပါ … ။ :harr:
စိတ်ထဲ ဒီနာမည်လေး ရင်းနီးနေသလားလို့….ထင်နေတာ အီးတုံးပြောမှပဲသေချာသွားတော့တယ်။ ….မူးမဲမ ဘယ်ရောက်နေလဲမသိ..။ အဟိ
ပြောတော့ပါဘူးအေ … အဲလေ ဗျာ …..
ပိတ်ကားထက်မှာ စောင့်မျှော်လျှက် …………….
အသစ်လေးရေဗျ ၊ အထူးသဖင့် ရွာ့ ပင်တိုင် ရွာသားကြီးများ မျှော်လင့်စောင့်စားနေကြ
သေသောသူ ကြာရင် မမေ့ တဲ့
ဟဲ့ မှားများမှားသွားပီလား မသိ ။ :harr:
( ဒီနေ့ပဲဝင် ဒီနေ့ပဲတင်လို့ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါလို့…။
ဆိုတော့ကာ…ဘယ်ရွာသူ ရွာသားအဟောင်းကြီးများရဲ့ ထောက်ခံချက်နဲ့များ
ဝင်လာပါလိမ့်လို့ ..သိချင်မိသား… :harr:
အဟစ် ….. အဟစ် သူကရွာထဲဝင်တာကြာနေပီပေ့ါ …… အခုမှ ပြန်အသက်ဝင်လာတာပါ …. သူတင်ထား တဲ့ ဒိတ်ကလေးကို ပြန်ကြည့်ပေးကြပါ …… သူက ရွာထဲကို မိတ်ဆက်စာတစ်စောင်နဲ့ဝင်လာပြီး သမီးတို့ကို ခင်တယ် သဘောကျတယ်ဆိုတာ ပြောပြီး ကော်မန့်ရော ပို့စ်တွေပါမလာတော့တဲ့ ညီမလေးပေ့ါ ……
တမီးက …. ဟိုးတုန်းက တော့မန့် အရေးရဒေးရို့ …. ဝင်ပွားမိဒါပါ ……. မွှားတာ ချိယင် ဒေါင်းပေါ်က ဂျိုကိုင်ဘီး တောင်းပံပါတယ် ချင့် … အခွိခွိ ။
တည်တည်တံ့တံ့ရေးပါအေ … လူအထင်သေးခံရအောင် ရွာဆူအောင်မလုပ်ပါနဲ့ …… ချွေးမလေးက ကိစ္စမရှိပေမယ့် … မာမီက လူကြီးလေ … ရုပ်ကိုတည်ထားရမှာပေါ့လို့ ….
ယောက္ခမဂျီး …. တားကိုတောင် မရသေးဘူး … ချုပ်လား ချယ်လား မလုပ်ပါနဲ့အေ … ။ ကွန်ထရိုးလုပ်လို့ ရတဲ့ ချွေးမမျိုးဟုတ်ဘူးနော် …. ။
မာမီဘာသာ တည်ချင်တည် ရီချင်ရီ … တမီးကတော့ ကမ်း ကုန်အောင် ပေါမှာပဲ .. တူညားအထင်ဂျီးအောင် …. လူဂျီးလူဂေါင်းလို ဟန်ဆောင်နေရတာ ပင်ပန်းဒယ် ….. ဒါဗြဲ …. :harr: